सरकारले दुवै विद्यालयलाई एउटै लेन्सले हेर्नुपर्छ : डा वसन्तप्रसाद अधिकारी – Chitwan Post
पूर्वी चितवनको रत्ननगर १० बैरिया निवासी डा वसन्तप्रसाद अधिकारी शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । लमजुङको सिरुवारीमा विसं २०१६ चैत्र १० गते जन्मिएका अधिकारी २०४४ सालमा चितवन बसाईँ सरेका हुन् । विसं २०३४ सालदेखि शिक्षण पेसा अंगाल्दै आएका उनले पढ्दै पढाउँदै ४० वर्ष शिक्षणमा बिताएका छन् । जीवन संघर्षै संघर्षमा बिताएका उनले सात वर्ष नेपाली सेनामा जागिर पनि खाए । सेनामा रहँदा पनि उनले पढ्ने र पढाउने मौका पाए । उनले कहिले निजी त कहिले सामुदायिक विद्यालयमा पढाए । उनले पञ्चकन्या मावि, नेपाल मावि, हिमालयन ई. बोर्डिङ स्कुल, चितवन बोर्डिङ स्कुल र मोहना माविमा गणित र विज्ञान विषय अध्यापन गरे ।
त्यसपछि विसं २०५० सालमा आफैँले न्यू स्पीडी बोर्डिङ स्कुल चलाए । उनको पढाइको भोक अझै बढ्दै गयो । चौध वर्षपश्चात् अर्थात् २०६४ सालमा उनी पिएचडी अध्ययनका लागि लन्डन गए । युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डनबाट शिक्षक शिक्षण विषयमा पिएचडी गरे । २०७१ सालमा नेपाल फर्केपछि स्कुलमै समय दिए । २०६८ पछि लाइसियम इन्टरनेसनल मोडल स्कुलका प्रिसिन्पल भए । अहिले उनी लाइसियम स्कुलको व्यवस्थापन तथा अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ गैँडाकोटको रिसर्च कोअर्डिनेटर भई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हेर्छन् । अध्ययनकै क्रममा युरोप, अमेरिका, मेक्सिकोलगायत २० भन्दा बढी मुलुकको प्रणाली, आर्थिक प्रगति र चमत्कारिक विकास नियालेका उनले १५ देशमा विदेशमा काम गर्न जाँदा नेपाली आमाका १६ वर्षका छोरीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोविज्ञान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जति पढे पनि र सिके पनि अध्ययनको भोक नसकिने बताउने डा अधिकारीले ५५ वर्षको उमेरमा पिएचडी गरेका हुन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग चितवन पोष्ट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको संवाद–
१) अमेरिकाको अध्ययन भ्रमणबाट भर्खरै फर्किनु भएको छ । विभिन्न मुलुकको विकास र समृद्धिको चमत्कार नियाल्नुभएको छ । नेपाली समाजको खास समस्याचाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
–हाम्रो देशको समृद्धिको बाधकहरुलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ : क) संक्रमणकालीन संघीयता : जुन भर्खरै लागू भएको छ । ख) राजनीतिक समूहहरुबीचको असन्तुलन र खिचातानी । ग) जनतामा संघीयताको पूर्ण ज्ञानको अभाव । घ) गरिबपना र अशिक्षा । ङ) देशका राजनीतिज्ञहरुमा राष्ट्रप्रतिको कमजोर संवेदनशीलता र चिन्तन । च) छिमेकी राष्ट्रहरुको खिचातानी र आफ्नो स्वार्थसिद्धको भावना ।
–स्वास्थ्य बिमाप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको देखिन्छ तर स्वास्थ्य बिमा लागू भएपछि उपचार सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचमा यो सेवा बिल्कुल पुग्न सकेको छैन । हालको स्वास्थ्य बिमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने र जनतामाथिको लुट र तुच्छ पोलिसी हो । किनभने, अस्पतालमा बिमाको औषधि प्रेपक्रिप्सनमा मात्र सीमित छ । यो स्वास्थ्य बिमाको नाममा धब्बा हो म दाबीका साथ भन्न सक्छु । यो पोलिसी हचुवामा लागू गरिएको हो किनभने बिनाअनुसन्धान लागु गरिएको नीति अन्ततः असफल हुन्छ । यो पोलिसीले जनताहरुमा अस्पतालहरुप्रति जनताहरुको नकारात्मक भावनाको विकास विस्तारै बन्दैछ । सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा के भने हस्पिटलमा बिमाको औषधि लिन जाँदा बिमाको औषधि छैन किनेर लानुस भनिन्छ । यो लुट नभए को हो त ? जनता सबै नबुझ्ने छैनन् । सरकारले यो पोलिसीको राम्रो अध्ययन गरेनन् भने भविश्यमा सरकारले ठूलो चुनौती भोग्नु पर्दछ ।
–मेरो विचारमा सभ्य समाज निर्माण गर्ने सूत्रहरु यस प्रकार छन् ः क) हरेक नेपालीहरुमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको पहुँच हुनुपर्दछ । ख) स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका हकमा टप डाउन रिसर्च होला कभरेज पोलिसी सुक्ष्म अध्ययनपश्चात् लागू गर्नु पर्दछ । ग) देशमा भ्रष्टाचार शून्य नीति लागू गर्नुपर्छ । घ) राजनीतिज्ञहरुमा राजनीतिक मूल्य हुनुपर्छ । ङ) हाम्रो समाजमा हरेक वर्ग, जाति, अल्पसंख्यक समूहलाई समानताको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । च) हाल हावी भएका धनीहरुको सहर प्रेमको सहरमुखी भावनामा परिवर्तन गरी गाउँमुखी प्रेमको भावना विकास हुनु पर्दछ । छ) हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कृति र नेपालीपनको जर्गेना गर्नुपर्दछ । ज) हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी हुनु पर्दछ । झ) ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन हालको चलन परिवर्तन गरी कानुन सबैका लागि र समान अवसरका लागि भन्ने नीति व्यावहारिकरुपमै लागू हुनुपर्दछ ।
–म २०३४ सालदेखि विद्यार्थी–शिक्षक भएर आजसम्म आफ्नो अध्ययनलाई नियमितता दिँदै आएको छु । मैले सरकारी, संस्थापक स्कुलहरु र नेपाली सेनामा पनि सेवा गरी आजसम्म मेरो समाज र राष्ट्रको लागि आफूले जानेका सीप र ज्ञान शेयर गरिरहेको छु । मैले चार दसकको शिक्षण यात्राका क्रममा थुप्रै संस्थामा रहेर काम गरिसकेको छु । यस अवधिमा खोज तथा अनुसन्धान एवम् अध्ययनमा कहिल्यै खडेरी लागेन । म मेरो ४० वर्षको मह¤वपूर्ण समयमा खोज तथा अनुसन्धान र अध्ययनमा यति रमाएँ कि भनेर साध्यै छैन । मलाई अझै थकाइ लागेको छैन । अझै पाँच वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा चमत्कारिक योगदान दिने लक्ष्य लिएको छु ।